”မြေကြီးမာန” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » ”မြေကြီးမာန”	11
Posted by Thint Aye Yeik on May 31, 2016 in Poetry | 11 comments
ဂျစ်စူ says: စိုပလိုက် စိုပလိုက်
Thint Aye Yeik says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 236
Foolish Girl says: မိုးကလည်းမိုးအတိုင်းအထွာနဲ့မိုး….. ရွာနှင့်ဦးပေါ့
မိုးထဲထီးမပါဘဲ တကိုယ်လုံးရွှဲရွှဲစိုတဲ့အထိ ဦးတည်ရာမဲ့လမ်းလျှောက်ချင်လိုက်တာ
Thint Aye Yeik says: တစ်ခါတစ်ရံမှာ
ဘဝဟာ. . .
manawphyulay says: မိုးကောင်းတုန်းတော့ ရွာထားဦးပေါ့ကွာ…
ဟင်း ဟင်း… ငါ့အလှည့်ကျမှ…..
Thint Aye Yeik says: ကိုယ့်အလှည့်ကျမှ မိုးနဲ့ကြိုးနဲ့ ပစ်ချမယ် ဆိုပါတော့. . .
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: မိုးတောင် အတိုင်းအထွာနဲ့ ရွာခိုင်းသဟ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
ခင်ဇော် says: နိ မာနကလည်း မိုးစို မလွတ်ပါလား
Thint Aye Yeik says: ဆင်းရဲသားမာန ဆိုတာ အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်
အောင် မိုးသူ says: မရှိမာန